သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - ။ DongGuang BEC နည်းပညာ, LTD
အမိန့်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါသင့်လျော်သောအဖြစ်, သင်သည်သင်၏ရိုက်ထည့်ဖို့တောင်းစေခြင်းငှါ: အမည်, e-mail လိပ်စာ, လိပ်စာသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ် mailing ။ သငျသညျ, သို့သော်, အမည်ဝှက်ကျွန်ုပ်တို့၏ site သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုငျသညျ။
သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံ personalize မှ
အရောင်းအကို process မှ
သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို, အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်စေ, မေတ္တာရပ်ခံအဆိုပါဝယ်ယူကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုပို့ဆောင်၏ express ကိုရည်ရွယ်ချက်ထက်အခြား, ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်သမျှမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကိုအခြားကုမ္ပဏီအားပေးပြီးမှ, သင့်သဘောတူညီချက်မပါဘဲ, လဲလှယ်ရောင်းချလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အကြှနျုပျတို့သညျအမိန့်နေရာသို့မဟုတ်ဝင်သောအခါ, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်တင်ပြရန်, သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဝင်ရောက်ဖို့လုံခြုံရေးအစီအမံအမျိုးမျိုးအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
ကျနော်တို့လုံခြုံတဲ့ဆာဗာ၏အသုံးပြုမှုကိုဆက်ကပ်။ အားလုံးထောက်ပံ့အထိခိုက်မခံ / အကြွေးသတင်းအချက်အလက် Secure Socket Layer (SSL) ကိုနည်းပညာကနေတဆင့်ကူးစက်ပြီးတော့သာထိုကဲ့သို့သောစနစ်များအထူးလက်လှမ်းအခွင့်အရေးများနှင့်အတူအခွင့်အာဏာရှိသူများအားဖြင့်လက်လှမ်းဖြစ်ရနျကြှနျုပျတို့၏ငွေပေးချေမှုရမည့်တံခါးပေါက်ပံ့ပိုးပေးဒေတာဘေ့စသို့ encrypted နှင့်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးငွေပေးငွေယူပြီးနောက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ (ခရက်ဒစ်ကတ်များ, လူမှုရေးလုံခြုံရေးနံပါတ်များ, ဘဏ္ဍာရေး, etc) ကြှနျုပျတို့၏ဆာဗာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့မည်မဟုတ်ပါ။
ကျနော်တို့ cookies များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်သလား?
ဟုတ်ကဲ့ (ကွတ်ကီးသငျသညျကိုခွင့်ပြုလျှင်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ site တစ်ခုသို့မဟုတ်ယင်း၏ service provider ကလွှဲပြောင်းခက်ခဲသင်၏ Web browser ကို (တဆင့်မောင်းကြောင့်သေးငယ်တဲ့ဖိုင်တွေရှိပါတယ်) သင့် browser များနှင့်ဖမ်းမိအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်သတိရဖို့က်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးစနစ်များကိုဖွကြောင်း
ကျနော်တို့အနာဂတ်၌ပိုကောင်း site ကိုအတွေ့အကြုံများနှင့် tools တွေကိုပူဇော်နိုင်အောင် site ကိုအသွားအလာနှင့် site အပြန်အလှန်အကြောင်းကိုစုစုပေါင်း data တွေကို compile ကွတ်ကီးကိုသုံးပါ။ ကျနော်တို့ပိုကောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ site ဧည့်သည်ကိုနားလည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ Third-party ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူကျုံ့စေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားဝန်ဆောင်မှုပေးငါတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့ မှလွဲ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားကောက်ယူသတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုမထားပေ။
ကျွန်တော်တို့သည်ကုန်သွယ်ရောင်း, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များပြင်ပမှာပါတီများမှလွှဲပြောင်းမပေးပါဘူး။ ဤသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှာ operating ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးပို့ချခြင်းသို့မဟုတ်သင်တို့သည်ဤမျှရှည်လျားသောသူတို့အားပါတီများလျှို့ဝှက်ဤအချက်အလက်စောင့်ရှောက်ဖို့သဘောတူအဖြစ်, servicing အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီသူကိုယုံကြည်စိတ်ချတတိယပါတီမပါဝင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့လည်းငါတို့လွှတ်ပေးရန်ဥပဒေနှင့်အလိုက်လျောဖို့သင့်လျော်သောယုံကြည်အခါ, သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖြန့်ချိကျွန်ုပ်တို့၏ site မူဝါဒများပြဋ္ဌာန်းရန်, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ဥစ်စာကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်အခြားသူများအခွင့်အရေး, အိမ်ခြံမြေ, ဒါမှမဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးကို non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်ဧည့်သည်သတင်းအချက်အလက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ကြော်ငြာ, သို့မဟုတ်အခြားအသုံးပြုမှုအခြားပါတီများပေးနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ COPPA (လေးမြား၏ online privacy ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေ) ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်နာမှု၌ရှိကြ၏, ငါတို့အသက် 13 နှစ်အောက်မည်သူမဆိုထံမှမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းကြပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်, ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးအနည်းဆုံး 13 နှစ်ရှိသို့မဟုတ်အထက်၌နေသောသူသည်လူများတို့အားညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။
ဒီအွန်လိုင်း privacy ကိုမူဝါဒကသာကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်နှင့်မသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းအော့ဖ်လိုင်းမှစုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်သက်ဆိုင်သည်။
ကြှနျုပျတို့၏ site သုံးခြင်းဖြင့်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာ privacy ကိုမူဝါဒကသဘောတူသည်။
ဒီကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါတယ် အကယ်. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
ဤမူဝါဒ Dongguan BEC နည်းပညာ Co. , Ltd မှစွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ် .